Sidee Adeegyada Metro, Ankaray iyo EGO Bus ay ku sii jiri doonaan Ankara xaddid 4-maalmood ah? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraSidee Adeegyada Metro, Ankaray iyo EGO Bus ay ku sii jiri doonaan Ankara xaddid 4-maalmood ah?
Sidee adeegyada basaska metro iyo ego loogu isticmaali doonaa xayiraadaha maalinlaha ah ee Ankara?
Iyada oo la raacayo baaxadda tallaabooyinka laga qaadayo cudurka 'coronavirus' (Covid-19), bandoowga ayaa la dhaqan gelin doonaa 16-19 Meey 2020, iyada oo lagu saleynayo go'aanka Ankara Governorship-ka ee Golaha Fayadhowrka Guud ee Gobolka, oo ku taariikhaysan 13.05.2020 iyo tirsigiisu ahaa 2020/34, oo leh basaska Agaasimaha Guud ee EGO. Xirfadlayaasheena daryeelka caafimaad iyo muwaadiniinta kale ee laga reebay inay baxaan inta udhaxeysa 16-17 iyo 2020-07.00 maalinta 09.00-16.30 May 20.00 iyo inta udhaxeysa 18-2020 maalinta Talaadada, 19ka Meey 2020 iyo Talaadada, 07.00ka May 20.00 ayaa la adeegi doonaa.
Intaa waxaa u dheer, beddelashada waqtiyada bixitaanka iyo dariiqyada basaska EGO, ee kasii wada adeegta 440 layn oo dhaqan ahaan ah, ayaa la cusboonaysiiyay baaxadda Go'aanka. Cusbooneysiinta waxaa laga heli karaa arjiga mobilka ee EGO CEP iyo websaydhka Shirkadeena (www.ego.gov.t waa) qeybta "Nidaamka Gaadiidka Magaalada / Nidaamka Macluumaadka Webka".
Si kastaba ha noqotee, iyada oo loo eegayo xaqiiqda in bandoow la soo rogi doono Talaadada, 19ka May 2020, "Meey 19, Xuska Atatürk, Maalinta Dhallinyarada iyo Isboortiga", laga bilaabo 06.00:24.00 maalmaha ciidaha diinta iyo qarankaba ilaa "Doorashada Maamulka Hoose ee Koowaad" oo ay heshay Golaha Degmooyinka Magaalada Ankara. laga bilaabo 07.00:20.00 ilaa habeenkii, adeegsiga bilaashka ah ee adeegyada gaadiidka dadweynaha ee ay bixiso hay'adda EGO General Directorate oo leh basaska, nidaamyada tareenka iyo gawaarida fiilada… ”Go'aanka, muwaadiniinta laga reebay inay baxaan taariikhda la xusay waxay awood u yeelan doonaan inay ka faa'iideystaan ​​basaska EGO ee adeegi doona inta u dhaxaysa XNUMX-XNUMX.
Waqtiyadi ugu dambeysay ee bixida tareenka ee loogu talagalay M15, M2020, M1 iyo M2 jimcaha, Meey 3, 4 waa sida soo socota:
Sidee duulimaadyada "ZBBAN", ESHOT iyo Metro ay u noqon doonaan usbuuca dhamaadka magaalada İzmir
3. Dakhliga maalinlaha ah marka buundada ay dhammaato waxay noqon doontaa ugu yaraan 405 kun doolar